Tinoka Roberto : Niaiky fa namita-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaTinoka Roberto : Niaiky fa namita-bahoaka
06/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Diso tanteraka ny fandraisan’ny vahoaka malagasy ny fihetsika nasehon’ny Mapar teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai nandritra ny fitokonana notarihin’ireo depiote miisa 73. Maro tokoa mantsy no nihevitra fa dia ny hanongam-panjakana mihitsy no tanjon’iny fitokonana teny amin’ny 13 Mai iny. Tsy izay anefa no tena marina hoy ny depiote Tinoka Roberto nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony teny an-kianja omaly. Ny ahatongavana amin’ny fifidianana madio handraisan’ny rehetra anjara, indrindra eken’ny mpisehatra politika rehetra no tena tanjon’ny hetsika raha ny fanazavany. Izany hoe resaka fotsiny niniana nalefa hanatrarana ny tanjona ilay hoe “Miala Rajao” fa tsy dia nisy lanjany akory. Ny governemanta mantsy no tena nokendrena harodana ahafahan’ireo olona tsy miandany atsy na aroa mikarakara ny fifidianana araka ny nambarany ihany.Tratra araka izany ny tanjona satria dia nanana fandeferana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ho fitsinjovany ny vahoaka malagasy, ka nandrava ny governemanta Mahafaly. Niaiky fa namita-bahoaka arak’izany ireto depioten’ny 13 mey ireto. Mbola tsaroan’ny olona ny vavabe sy fandrahonana nataon’ I Tinoka Roberto tamin’ny Filoham-pirenena, tamin’ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena, tamin’ny filohana andrimpanjakana, saika isan’andro, ka amin’izao fotoana izao ve dia milaza fa tsy nanao na inona na inona ? Hafa ny nambara omaly, ary hafa ny nambara androany. Izany no hatao hoe “mamita-bahoaka”.
Anisan’ny fanentanana napetraka teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ihany koa ny tokony hanajana ny lalàna velona eto amin’ny firenena, mba tsy hisian’ny tsimatimanota intsony. “Rariny loatra araka izany, raha toa ka nanatanteraka ny didy navoakan’ny HCC izahay Mapar, ka nanolotra anarana olona miisa telo hotendren’ny Filoham-pirenena ho Praiminisitra” hoy hatrany ity depiote Mapar ity. “Avy amin’ny Mapar ny Praiminisitra Ntsay Christian, ka tsy menatra ny amin’izany izahay” hoy ny depiote Tinoka Roberto. Tsy miantoka ny fahadiovan’ny fikarakarana ny fifidianana mantsy raha toa ka olona manana firehan-kevitra tokana toa azy ireo no notendrena ho Praiminisitra raha ny fanazavany. Tsy maintsy noporofoinay fa tsy mpanongam-panjakana ny mpitarika anay hoy hatrany ny fanazavana teny an-kianja omaly.
Tetsy ankilany diso fanantenana tanteraka tamin’ny fihetsika nasehon’ny Mapar ireo depiote Tim. Noraisin’izy ireo ho famadihana avy hatrany mantsy ny fiovam-pihetsika mahery vaika nataon’ny Mapar hatramin’ny alatsinainy hariva teo iny. Ny fandravana ireo andrim-panjakana rehetra mantsy no nifanarahana, izany hoe miainga avy amin’ny filoham-pokontany, ka hatrany amin’ny Filoham-pirenena, raha ny fanazavan’ny depiote Guy Rivo Randrianarisoa. Tampoka teo anefa dia nivadika ho fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana indray izany, tranga toa mahagaga, ary manao tsinontsinona ny tolona niraisana raha ny nambarany teny amin’ny 13 Mai ihany koa. Izany hoe tsy nitovy hatrany am-boalohany araka izany ny hevitra ho an’ireo depiote miisa 73 Izay nitarika ny fitokonana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Ny Tim nihevitra, ary niantehitra amin’ny Mapar fa tena fanonganam-panjakana no natao, ny Mapar kosa nihevitra fa ny fandrodanana ny governemanta Mahafaly no tanjon’ny tolona, fa tsy hanakorontana ny firenena. Tsy tokony hohadinoina anefa fa nitovy tsy nisy valaka ny kabary nataon’ireto depiote ireto teny an-kianja nandritra izay iray volana mahery kely izay. Samy nanao fiteny nanevateva ireo mpitondra ankehitriny, samy samy nanao antso avo hoe “Miala Rajao”, ary niaraka nanakatona ireo minisitera maro nandritra ny fitokonana. Amin’ny vondrona Mapar anefa, dia sady tsy fanakorontanana no tsy fanonganam-panjakana avokoa no antony nanaovan’izy ireo ireny fa fandravana governemanta fotsiny ihany.
Nisesisesy tokoa ny fanafihana teny amin’ireny lalam-pirenena ireny ary namoizana aina maro ihany koa. Taxi-brousse, fiara tsotra, kamio, lasibatr’ireo mpanakan-dalana sy mpanao fanafihana mitam-piadiana avokoa ka noho izany indrindra dia… Kara-panondro Fepetra efa noraisina tamin’ny ...Tohiny
Kaominina Antananarivo-Renivohitra:TSY MAHALOA NY KARAMAN’NY MPIASA INDRAY
Lalatiana Ravololomanana : « Tsy mendrika ny ho filoham-pirenena i Marc Ravalomanana »
MAPAR sy TIM : Loza mihoatra ny Pesta